Usapotsa kuziva ichi chikamu cheICloud Photo Library | Ndinobva mac
Usarasikirwa nekuziva ichi chikamu cheICloud Photo Library
Chimwe chezvinhu izvo vashandisi vachiri kusanzwisisa mashandiro anoita ICloud Photo Library. Mune imwe chinyorwa ndakatsanangura zvakadzama mashandiro ayo, asi ini handina kukura zvakakwana izvo zvandinoda kugovana newe nhasi.
Mumwe wandinoshanda naye akandikumbira kudzima iyo ICloud Photo Raibhurari kubva ku iPad yake nekuti aingoda kuti ive pane iyo iPhone. Izvi zvaizosunungura nzvimbo pane yekutanga-chizvarwa 16GB iPad mini.
Pakukumbira, ndakaenda zvinotevera kunatsaidza Raibhurari Yemifananidzo. Tevedza nhanho idzi kudzima iCloud Photo Library pane imwechete kifaa:
Pane yako iPhone, iPad, kana iPod touch:
Kana iwe uri kushandisa iOS 10.3 kana gare gare, enda ku Zvirongwa> [zita rako]> iCloud> Mifananidzo, wobva wadzima iCloud Photo Library.
Kana iwe uri kushandisa iOS 10.2 kana apfuura, enda kuZvirongwa> iCloud> Mifananidzo, wobva wadzima iCloud Photo Library.
PaMac yako, enda kuSystem Preferences> iCloud> Sarudzo padhuze neMifananidzo uye sarudza iCloud Photo Library.
Pane Apple TV 4K kana Apple TV (yechina chizvarwa), enda kuZvirongwa> Maakaundi> iCloud. Mu Mifananidzo, tinya Sarudza kudzima iCloud Photo Library.
1 Ini ndinoremadza sei iCloud Photo Library pane imwechete kifaa?
2 Ini ndinobvisa sei zvese zvirimo muICloud Photo Library kubva kuICloud uye kubva kumidziyo yangu?
Ini ndinoremadza sei iCloud Photo Library pane imwechete kifaa?
Sezvauri kuona, ndinokuudza kuti uite matanho aya kuti ukwanise kumisa Photo Library Uno yemidziyo yako uye apa ndipo pane izvo zvandiri kuda kujekesa zvinobva. ICloud Photo Library haina kuremara kubva kuApple ID asi kubva kune chishandiso chine yako Apple ID pairi. Unogona kudzima iyo Photo Library pane iyo iPad asi kwete iyo iPhone. Unogona kuva nayo paMac uye kwete paIpad. Iwe unogona kugadzira kumisikidzwa kwaunoda.
Paunovhura iCloud Photo Library, iwo mapikicha muCamera Roll anowedzerwa kuAll Mifananidzo album. Zvakare, mifananidzo kubva kuMy Photo Stream iyo iri muYangu Photo Stream album asi isina kuchengetwa muraibhurari inodzimwa. Ukangomisa iCloud Photo Library, iyo Yangu Mapikicha Ekutepfenyura albam haizowoneka zvakasiyana.
Kana iwe uine chimwe chigadzirwa chine My Photo Stream yakavhurwa uye iCloud Photo Library yadzimwa, iwe ucharamba uchiona My Photo Stream album pane icho chigadzirwa. Mifananidzo yose yaunotora kana kuwedzera kuraibhurari ichaonekwa muayo albham pane icho chinhu.
Saka kana iwe uchida kuwana yakawanda nzvimbo pane diki chinzvimbo mudziyo asi iwe uchida kunakidzwa nePhoto Raibhurari mune yakasara, tevera nhanho dzandataura.
Ini ndinobvisa sei zvese zvirimo muICloud Photo Library kubva kuICloud uye kubva kumidziyo yangu?
Kudzima iCloud Photo Library kwese kwese, tevera nhanho idzi:
Kana iwe uri kushandisa iOS 10.3 kana gare gare, enda kuZvirongwa> [zita rako]> iCloud> Kuchengeta. iCloud> Manage Kuchengeta> iCloud Photo Library, wobva wasarudza Dzima uye bvisa.
Kana iwe uri kushandisa iOS 10.2 kana apfuura, enda kuZvirongwa> iCloud> Kuchengeta> Manage Kuchengeta> iCloud Photo Library, wobva wasarudza Dzima uye bvisa.
PaMac yako, enda kuApple menyu> Sarudzo dzeSystem> iCloud. Dzvanya Manage uye sarudza Photo Library. Wobva wasarudza Deactivate uye Delete.
Mifananidzo nemavhidhiyo zvichachengetwa muaccount yako kwemazuva makumi matatu. Kuti utore mifananidzo nemavhidhiyo kune yako iOS kifaa, enda kuZvirongwa> [zita rako]> iCloud> Mifananidzo uye sarudza Dhawunirodha uye chengeta mavambo. PaMac yako, vhura Mifananidzo, sarudza Mifananidzo> Zvaunofarira, wobva wasarudza Dhawunirodha mavambo pane iyi Mac. Unogona zvakare kusarudza mafoto nemavhidhiyo aunoda kurodha pasi kubva iCloud.com.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Usarasikirwa nekuziva ichi chikamu cheICloud Photo Library
Carolina Castro akadaro
Mhoroi, ini ndoda kuziva kuti ndingaite sei kuti nditore mapikicha angu kubva kune iPhone 4 uye ini handina kuishandisa kwenguva yakareba
Pindura kuna Carolina Castro
Belgium neNetherlands ndidzo dzichava nyika dzinotevera apo Apple Pay ichasvika